इटहरीमा ड्रोजर लगाउदै इटहरीका मेयर – पुरा पढ्नुहोस्……
इटहरीमा ड्रोजर लगाउदै इटहरीका मेयर
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले सार्वजनिक जगगा मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाउने अभियानको पुनःसुचारू गरेका छन । गत असारदेखि स्थकित रहेको सार्वजनिक जग्गा खोजि अभियानलाई शुक्रबार निरन्तरता दिदै इटहरी उपमहानगर ५ खेति खोला स्थित खोलाको जग्गामा बनाइएका घरहरू ड्रोजर लगाएर हटाइएको छ ।
शुक्रबार बिहान मेयर , नगर कर्मचारी ,प्रहरी प्रशासन लगायत समाजिक ब्याक्तित्वहरूको उपस्थितीमा सो क्षेत्रको घरहरू ड्रोजर लगाएर भत्काइएको हो । सार्वजनिक जग्गा खोजिका क्रममा इटहरी ५ खेतिखोलाको जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयहरूले बनाएको पक्कि घर भत्काइएको मेयर चौधरीले बताए । उनले इटहरी ५ स्थित स्थानीयहरूको तिनवटा पक्की घर भत्काइएको तर नाम उल्लेख भने गर्न मानेनन ।
मेयर सहितको प्राविधिक टोलि सो स्थानमा पुगेर जग्गा नाप्दा स्थानीयहरूबिच कोलाहल मच्चीएको थियो । मुठभेटको सम्भावना हुने देखिएपछि बाक्लो प्रहरी पिचालन गरी खोलाको जग्गा मिचेर बनाएका घरहरू भत्काइएको थियो ।
इटहरीका मेयरको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा खोजि अभियान चलाएर केही स्थानमा ड्रोजर नै चलाएका थिए तर माथिल्लो नेता देखि राजनीतिक दबाब आएपछि चल्दै गरेको अभियान बिचमै रोकिएको थियो ।
पुन स्थानीयहरूको दबाब बढेपछि तत्काल राजनीतिक दलको बैठक बोलाएर सबैबाट सहमति लिएपछि शुक्रबारबाट उक्त अभियान सुचारू गरिएको हो । अब यो अभियान निरन्तर रहने बताइएको छ ।
Prevकति मार्मिक गित गाइन फेसबुक बाटै सबैलाई भाबुक बनाइन (भिडियो सहित)
Nextबालक छोरा पढाउने गुरुलाई लेखेको यो चिठीले विश्वका अर्बौ मानिस स्तब्ध बने !
रामकृष्ण ढकालको आयो अर्को मर्मस्पर्शी गीत ”तिम्रो महल” -हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित)
नेपालीको माया देखेर विश्व चकित: श्रृंखलाको अग्रता कायमै, अझ धेरै भोटका लागि भोट गर्दै, सक्दो सेयर गरौं !
बिहेको अघिल्लो दिनदेखि बेपत्ता दुलाह भारतमा घुम्दै- यस्तो थियो कहानी